Yintoni ukusebenzisa i-nandrolone decanoate injection? | AASraw
/Blog/nandrolone decanoate/Yintoni ekusetyenziselwa ngayo i-Nandrolone injano?
ezaposwa ngomhla 10 / 31 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo nandrolone decanoate.
Deca Durabolin, ngokuqhelekileyo kuthiwa "iDaa" nje, ligama legama Nandrolone (C28H44O3), i-anabolic steroid ephucula ukusebenza ngokunyusa amandla kunye nesigxina, ukunciphisa ukukhathala kwemisipha, kunye nokwandisa ukukhula komzimba. Ibonelela ngexabiso elihle emva kwexesha kunye nemiphumo embalwa yecala xa isetyenziswe ngokufanelekileyo. Siyabulela uluhlu olubanzi lwamanani asebenzayo, amaninzi amadoda ayinyamezela. Funda kabanzi malunga noDaa Durabolin ukuthengiswa ngezantsi ukufumanisa ukuba ngaba yinto efanelekileyo.
I-Deca Durabolin ipowubhi eluhlaza - iPeta Durabolin ipowder eluhlaza?
I-Deca Durabolin ipowder eluhlaza edayiswayo i-steroid kakhulu ene-anabolic eneempawu ezincinci kunye ne-androgenic, nto leyo ithetha ukuba inika i-earnings ebonakalayo kunye nemiphumo embalwa kakhulu engathandekiyo xa isetyenziswe ngokufanelekileyo. Olu hlobo lwexesha langekho-mali alufaki isisindo ngokukhawuleza njengoko abanye benzayo, kwaye lunexesha elide lobomi njengoko luqhubeka lukhulula emzimbeni ixesha elide ukuya kwiiveki ezintathu. Ezinye i-steroids zongeza ubunzima ngokukhawuleza, kodwa ubuninzi bobunzima bubuninzi. Iziphumo ze-Deca Durabolin ezigqithisileyo ziyihluke. Iintlawulo ziza ngokukhawuleza, kodwa zinomgangatho ophezulu. Ukunciphisa ubunzima beCaa, abanobuciko abaninzi baqala ukuqala imijikelezo yabo kunye nekhampani esebenza ngokukhawuleza. Dianabol.
I-Deca Durabolin ipowusi eluhlaza edayiswayo ifumaneka kwifom ejoyiweyo, iipilisi, kunye neelwelo. Nangona kunjalo, kuba iipilisi kunye neepsulules zithatha ixesha elide ukusebenza kwaye zincinci, zibaninzi bakha umzimba ukhetha iigciwane. Ngefom yefayili, akukho nhlobo yepotenti elahlekileyo ngexesha lokutya kwaye unokufumana iziphumo ezingcono i milligram ye-milligram. Okubaluleke ngakumbi, ngenxa yokuba le ngxube ehamba ngokukhawuleza kunamanye, awuyi kuba nokukhawuleza "ukukhawuleza" nezinye i-steroids ezinokubangela.
Ulwazi lweCaa Durabolin
Nangona abaninzi abantu bakholelwa ukuba iipilisi zeDaabolin okanye iinjenisi ziphela nje zokubamba, oku akukukho okwenyaniso. Abagijimi abaninzi bafumana ukuba i-regaen ye-Deca Durabolin injenjini ngexesha lokusika iyanceda. Ngexesha lomjikelezo wokusika, abadlali beentlethi kunye nokuzivocavoca ukunciphisa amanqatha omzimba. Ngelishwa, oku kutya kunye nokuzilolonga kudla ngokubangela ukukhathala nokungabikho kwamandla, ngokunjalo. Njengoko kuchazwe ngasentla, ukuxhaswa ngeqondo eliphantsi likaDaaa Durabolin ngexesha lesigaba sokusika kunokuncedisa amandla kunye nesigxina, ngaloo ndlela uncedise ukusika izixhobo ezifana Winstrol sebenza ngcono.
Ukujikeleza kwimijikelezo ekhuselekileyo kufinyelele kwiiveki ze-18 kunye nale mveliso, nangona uthabatha ngaphezulu, umfutshane wakho umjikelo kufuneka ube. Umzekelo, ukuba uthatha kuphela i-300mg ngeveki, umjikelezo weveki ye-18 ukhuselekile. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ukhetha umthamo ophezulu, unokufuna ukunciphisa umjikelo wakho kwiiveki ze-12 kuphela. Oku kunceda ukukhusela ezinye zeempembelelo ze-Deca Durabolin ezingafunekiyo, ezinjengeengxaki zexesha elide okanye iingxaki zeengtso.
Kuyiwaphi ukuthenga i-Nandrolone yangempela yokunquma i-powder eluhlaza kwi-intanethi?
Unokufumana i-Nandrolone Decanoate source source online, kodwa kunzima ukuthenga i-Nandrolone Decanoate powder online. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthengela i-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Ingcaciso engakumbi malunga,wamkele ukucofa apha.
Modafinil: Ndingayifumana njani i-Modafinil powder?	apho ukuthenga i-sildenafil citrate (Viagra) kwi-intanethi?